Waxsii sheegid badan oo gaar ah ayaa rumoobay waqtigii Axdigii Hore, oo waxaan filan karnaa wax intaa ka sii badan. Laakiin wax sii sheegidda oo dhan, diiradda ayaa ku jirta wax gabi ahaanba ka duwan: madax furasho - cafiska dembiyada iyo nolosha weligeed ah ee ku timaadda Ciise Masiix. Waxsii sheegiddu waxay ina tuseysaa in Eebbe yahay tusaha taariikhda (Daanyeel 4,14); waxay xoojisaa aaminsanaanta Masiixa (Yooxanaa 14,29) wuxuuna ina siinayaa rajo mustaqbalka (1aad)
Baybalku wuxuu shaaca ka qaadayaa soo laabashada Masiixa iyo Xukunka Ugu Dambeeya, wuxuu ku dhawaaqayaa ciqaab weligeed ah iyo abaalmarin. Marka sidaas la sameeyo, waxay dadka u muujineysaa in badbaadadu ay lama huraan tahay isla mar ahaantaana badbaadada ay si nabad ah ku imaan doonto. Waxsii sheegiddu waxay noo sheegaysaa in Ilaah nala xisaabtami doono (Yuudas 14-15) wuxuu doonayaa inuu na furto (2 Butros 3,9) iyo inuu isagu mar hore na soo furtay (1 Yooxanaa 2,1: 2). Waxay noo xaqiijineysaa in sharka oo dhan la jabin doono, in caddaaladdarrada iyo silica oo dhan ay dhammaan doonaan (1 Korintos 15,25:21,4; Muujintii).
Tusaalaha tusaale ahaan luuqadda calaamadaha: Sabuurka 18-aad. Qaab gabayo ah, wuxuu ku sharraxay sida Ilaah uga badbaadiyo Daa'uud cadaawayaashiisii (Aayadda 1). Daauud wuxuu adeegsadaa calaamado kaladuwan tan: Ka bax meesha dhabta ah (4-6), dhulgariir (8), saxeex cirka (10-14), xitaa ka badbaadinta dhibaatada (16-17). Waxyaabahan runtii ma dhicin, laakiin waxaa loo isticmaalay si astaan ​​ahaan iyo gabayo ahaan ahaan muuqaal ahaan loo muujiyo xaqiiqooyinka qaarkood, si looga dhigo "wax muuqata". Tani waa waxa waxsii sheegistu sameeyaan.
Ciise wuxuu xertiisii ​​ku dhawaaqay inuu "soo noqon doono" (Yooxanaa 14,3). Isla mar ahaantaana, wuxuu uga digayaa xerta inay ka lumiyaan waqtigooda xisaabinta taariikhda (Matayos 24,36). Wuxuu dhaleeceeyay dadka u maleynaya in waqtigu dhow yahay (Matayos 25,1: 13), laakiin sidoo kale kuwa rumeysan dib u dhac dheer (Matayos 24,45: 51). Dhaqanka: Had iyo jeer waa inaan diyaarsanaano, had iyo jeer waa inaan diyaar u nahay, taasi waa mas'uuliyadeena.
Malaa'igahu waxay xertii u sheegeen: In alla intuu Ciise jannada yimid, wuu soo noqon doonaa (Falimaha Rasuullada 1,11). Isaga "is-muujin doona ... samada iyo malaa'igaha xoogga leh oo olol ololaya" (2 Tesaloniika 1,7: 8). Bawlos wuxuu ugu yeedhay "muuqashada ammaanta Ilaaha weyn iyo Badbaadiyeheenna Ciise Masiix" (Tiitos 2,13). Butros sidoo kale wuxuu ka hadlayaa “Ciise Masiix la muujiyey” (1 Butros 1,7: 13; eeg sidoo kale aayadda), sida John sameeyay (1 Yooxanaa 2,28). Sidoo kale waraaqda ku socota Cibraaniyada: Ciise wuxuu u muuqan doonaa "markii labaad" "kuwa u sugaya inuu badbaadiyo" (9,28).
Waxaa jira cod weyn oo ah “amar” cod weyn, iyo “codkii malaa'igaha”, iyo buunka Ilaah. (2 Tesaloniika 4,16). Imaatinka labaad wuxuu noqdaa mid cad, wuxuu muuqdaa oo la maqlaa, wuxuu noqon doonaa mid aan muuqan.
Waxaa la socon doona laba dhacdo oo kale: sarakicidda iyo xukunka. Bawlos wuxuu qoray in kuwa dhintay lagu soo sarakicin doono Masiixa marka Rabbi yimaado, iyo in isla waqtigaas rumaystayaasha nool lagu soo kici doono hawada si ay ula kulmaan kuwa soo degaya Eebbe. (2 Tesaloniika 4,16: 17). Bawlos wuxuu qoray, "Sababtoo ah buunku wuu dhawaaqi doonaa, kuwa dhintayna waa la soo sara kicin doonaa waanan beddeli doonnaa" (1 Korintos 15,52). Waxaan ku jirnaa isbadal - waxaan nahay "sharaf", xoog badan, aan dabacsanaan lahayn, aan dhiman karin iyo ruux ahaan (Aayadaha 42aad).
Matayos 24,31 waxay umuuqataa inay taas ku sifeyneyso mid ka duwan aragtiyaha: "Isaga [Masiix] wuxuu u soo diri doonaa malaa'igihiisa wata turumbooyin dhalaalaya, oo kuwuu doortay ayuu ka soo ururin doonaa afarta dabaylood, meesha ugu fog oo samada ilaa dhinaca kale." Haramaha Ciise wuxuu yidhi in dhamaadka da'da "uu u soo diri doono malaa'igihiisa oo waxay ka qaadi doonaan boqortooyadiisa wax kasta oo u horseeda baabba 'iyo wax khaldan" (Matayos 13,40: 41). "Maxaa yeelay waxay noqon doontaa in Wiilka Aadanahu ku yimaado ammaanta aabihiis isagoo la jooga malaa'igihiisa, markaasuu nin walba ugu abaalgudi doonaa siduu falay." (Matayos 16,27). Masaalka addoon aaminka ahu wuxuu ku jiraa soo celinta Rabbiga (Matayos 24,45: 51) iyo masaalkii dadka soo galay ayaa aaminay (Matayos 25,14: 30) sidoo kale xukunka.
Markuu Rabbigu yimaado, Bawlos wuxuu qoray, “Isaguna wuxuu iftiin doonaa” waxa gudcurka ku qarsoon, wuxuuna muujin doonaa dadaalka wadnaha. Markaas dadka oo dhan Ilaah baa ammaani doona. (1 Korintos 4,5). Dabcan, Ilaah mar hore wuu garanayaa qof kasta, sidaas darteed xukunku wuxuu dhacay waqti dheer kahor soo laabashada Masiixa. Laakiin markaa waa la "soo bandhigi doonaa" markii ugu horreysay oo qof walba loo sheegi doono. Xaqiiqada ah in naloo siiyay nolol cusub iyo in la abaalmariyo waa dhiirrigelin aad u weyn. Dhamaadka "Cutubka Sarakicidda" Bawlos wuxuu ku dhawaaqayaa: "Laakiin mahad Ilaah baa na siiya guushayada xagga Rabbigeenna Ciise Masiix! Sidaas daraaddeed, walaalahayga aan jeclahayow, xoog yeelo, oo adkaysta, oo had iyo goorba shuqulka Rabbiga kordha, maxaa yeelay, waad og tihiin in shuqulkiinna xagga Ilaah aanu waxtar lahayn. (1 Korintos 15,57: 58).
Si loo kicinayo xiisaha, macallimiinta wax sii sheegidda waxay jecel yihiin inay weydiiyaan: "Ma waxaan ku noolnahay maalmihii ugu dambeeyay?" Jawaabta saxda ah waa "Haa" - wayna sax ahayd 2000 sano. Butros wuxuu soo xiganayaa wax sii sheegid ku saabsan maalmihii la soo dhaafay wuxuuna ku dabaqayaa waqtigiisa (Falimaha Rasuullada 2,16: 17), sidoo kale qoraaga warqaddu wuxuu u qoray Cibraaniyada (Cibraaniyada 1,2). Maalmihii ugu dambeeyay ayaa aad uga dheeraaday sida dadka qaar u maleeyaan. Ciise wuu ka adkaaday cadowga wuxuuna qaatay da 'cusub.
Mar labaad iyo mar labaad, si kastaba ha noqotee, Masiixiyiinta qaar ayaa u muuqday kuwo "aan fiicnayn". Waxay u dhow yihiin harraad kadib dhibaatadii weynayd, oo lagu tilmaamay waqtiga degdega ee ugu xun ee abid weligiis jiri doona adduunka (Matayos 24,21). Waxay soo jiidatay ka gees ah, "xayawaan", "ninka dembiga leh" iyo cadowga kale ee Ilaah. Dhacdo kasta oo cabsi badan, waxay si joogto ah u arkaan calaamad muujinaysa in Masiixu dhowaan soo noqon doono.
Waa run in Ciise saadaaliyay waqti dhibaato daran (Matayos 24,21:70), laakiin inta badan wixii uu saadaaliyay waxaa lagu fuliyay go'doomintii Yeruusaalem. Ciise wuxuu xertiisii ​​uga digay waxyaalaha ay weli tahay inay iyagu isbaraan; tus. T. in ay lama huraan u ahayd dadka reer Yahuudiya inay u cararaan buuraha (V. 16).
Ciise wuxuu sii saadaaliyay waqtiyada degdega ah ee joogtada ah ilaa soo laabashadiisa. Wuxuu yidhi: Adigu adduunka waad dhib badan tahay (Yooxanaa 16,33, tarjumaadda dadka). Qaar badan oo xertiisa ah ayaa naftooda u huray caqiidadooda xagga Ciise. Tijaabooyinku waxay qayb ka yihiin nolosha Masiixiyiinta; Ilaahay naga ilaaliya dhibaatooyinkayaga oo dhan (Falimaha Rasuullada 14,22:2; 3,12 Timoteyos 1:4,12; Butros). Xitaa markaa waqtigii Rasuullada, ka geestayaasha ayaa shaqeynayay (1 Yooxanaa 2,18:22 iyo 2; 7 Yooxanaa).
Sidee ayey noqon doontaa - daa'in? Kaliya waxaan ognahay in jajabyada (1 Korintos 13,9: 1; 3,2 Yooxanaa) maxaa yeelay dhammaan ereyadeena iyo fikirradeennu waxay ku dhisan yihiin adduunka maanta. David sidan ayuu u dhigey: "hortaada, farxadda waxaa ka buuxda farxad iyo rayrayn midigtaada weligeed ah" (Sabuurradii 16,11). Qaybta ugu wanaagsan ee weligeed ahaanta waxay la noolaan doontaa Ilaah; sida loo noqdo; inaad isaga u aragto waxa uu runtii yahay; in la garto oo la garto isaga si ka wanaagsan (1 Yooxanaa 3,2). Tani waa himiladeena ugu dambeysa iyo dareenka uu Eebbe ina siiyay, wuuna na qancin doonaa farxad weligiisna waan siin doonaa.